भाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको नाङ्गो तस्विरहरु देखेपछि…. - ePosttimes
Homeसमाजभाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको नाङ्गो तस्विरहरु देखेपछि….
भाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको नाङ्गो तस्विरहरु देखेपछि….
६ कार्तिक २०७६, बुधबार १३:०६ समाज 0
बझाङमा । आफ्नै भान्जी करणी गरेको अभियोगमा मामा पक्राउ परेका छन् । मामाघरमा बस्दै आएकी भान्जीलाई केही वर्ष अघिदेखि नै मामाले पटक पटक यस्तो हर्कत गर्दै आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उनीमाथि बिहीबार करणीमा मुद्धा दर्ता गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थपसहित आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
कक्षा ९ मा अध्यनरत बालिकामाथि ६३ वर्षका मामाले उनीमाथि पटक पटक यस्तो हर्कत गर्ने गरेको खुलासा भएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले भान्जीको मोबाइलमा अश्लिल तस्बिरसमेत खिचेको भेटिएको छ ।
बालिकाको भाइले आफ्नो दिदीको मोबाइल चलाउन खोज्दा नजानेपछि गाउँका एक छिमेकीलाई मोबाइल चलाउन सिकाइदिन आग्रह गर्दा मोबाइलमा अश्लिल तस्बिर देखेपछि घटना बाहिरिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस : आफ्नै भान्जीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मामा पक्राउ
झापा। आफ्नै मामाले किशोरी भन्जीलाई करणी गरेको बुझिएको छ । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका-११, दुधेका ४१ वर्षीय मामाले आफ्नै घरमा बस्ने १६ वर्षीया किशोरी भान्जीलाई करणी गरेको घटना बाहिरीएको छ ।
उनले करणी गरेको घटनालाई ढाकछोप गर्नको लागि परिवारका सदस्य नै सक्रिय भएको खुलेको छ । गत बिहीबार बिहान घरमा कोही नभएको मौका छोपेर मामाले यस्तो हर्कत गरेको र कसैलाई नभन्न दबाब दिएको किशोरीको बताएकी छन्।
स्थानीय एक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीले साथीलाई रुदैँ घटनाबारे सुनाएपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले आरोपितलाई नै पक्राउ गरेको छ। पीडितकी बुबा भारतको दार्जिलिङ र आमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कारण प्रहरीमा जाहेरी दिने अभिभावकसमेत नरहेको अवस्थामा प्रहरीको आग्रहमा विद्यालयकी एक शिक्षिकाले जाहेरी दर्ता गरेकी हुन् ।
अभियुक्त पक्राउ परेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी पीडित किशोरीकी आमालाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेर मेडिकल टेस्ट र जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिइरहेका बुझिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले पीडित किशोरी र अभियुक्तको समेत मेडिकल चेकजाँच गरिएको छ । पीडीत बालिका अहिले विद्यालय र प्रहरीको संरक्षणमा राखिएको छ । यो घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ
63400cookie-checkभाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको नाङ्गो तस्विरहरु देखेपछि….yes
बेलबारीमा पहिलो पटक नोबेल अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता हुँने